Onye na-akwọ ụgbọala LED, Enyemaka Ike Switching, Ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka mmiri, High Bay Driver si China
IP65 gosiri Aluminom Ikanam Driver
N'èzí mpụga Liminaires Ọkwọ ụgbọ ala
Lighting Led ọkwọ ụgbọ ala
UFO High Bay Light Led Driver
Onye ọkwọ ụgbọ ala mberede LED
Ahịa isi: Americas , Asia , Europe , North Europe , Worldwide
IP65 gosiri Aluminom Ikanam Driver >
Nnukwu Voltage Industrial High Bay UFO
100-240 / 277V IP65 Dimming Ọkwọ ụgbọala
N'èzí mpụga Liminaires Ọkwọ ụgbọ ala >
Lighting Led ọkwọ ụgbọ ala >
UFO High Bay Light Led Driver >
Volta na-agbanwe agbanwe 24V Aluminom Waterproof Driver
IP65 gosiri Aluminom Ikanam Driver
N'èzí mpụga Liminaires Ọkwọ ụgbọ ala
Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n'ahịa
Lighting Led ọkwọ ụgbọ ala
UFO High Bay Light Led Driver
Ọkwọ ụgbọala dị elu
Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu ugbu a
Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa
Ọkwọ ụgbọala na-agba ọkụ mgbe niile
Ọkwọ ụgbọala na-edozi
Onye na-akwọ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ
Onye na-akwọ ụgbọ na-anọ ọdụ
Ọkwọ ụgbọala na-ebuchaghị ibu
Ọkwọ ụgbọala Na Enwu ọkụ ụgbọelu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọkwọ ụgbọala Na Enwu ọkụ ụgbọelu)
100W Too ọkụ mmanya ike ọkọnọ 27-54V
Nkwakọ ngwaahịa: Osisi
FD-100E-054B, emere ya nke ikpawara Aluminom. Onye ọkwọ ụgbọ mmiri ọkụ a na-aga n'ihu ugbu a dị mkpa maka ọkụ ọkụ n'okporo ámá, ikanam Wall Pack, Linear High Bay, ọkụ ọkụ dị elu, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọkụ ọkụ ọkụ, Street Lighting Driver, Ọkwọ ụgbọala...
Ikanam Too Light Led Driver 320W 640W 1000W
Ndị ọkwọ ụgbọ ala Fahold na-edozi nsogbu dakọtara n'etiti oriọna na oriọna oriọna na-aga nke ọma. Ha na-enye ike ma jiri ọtụtụ ụdị ikike ịme ihe ọkụ dị iche iche iji jikwaa ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ mgbidi, ọkụ ọkụ ọkụ na ihe ndị ọzọ. Anyị 0-10V / 1-10V dimmers na-akwado ma linear na...
Ikanam Low Bay ọkụ High arụmọrụ Driver 100W
Nkwakọ ngwaahịa: 50PCS / Kaadị
Fahold Industrial Low Bay Driver bụ ọkụ na-arụ ọrụ site na ijikọta ọnụ ahịa-arụmọrụ na imewe dị ọcha. Ọ na-enye ndị ahịa 36v 48v Dc Power Supply na uru niile nke ọkụ ọkụ ọkụ - belata ike ike, ogologo oge ọrụ yana obere ndozi. Lexgbanwe, nchekwa, na ntụkwasị obi, FaholdIp65 Dimmable Led Drivers bụ ezigbo ọkụ ọkụ ọkụ...
Lowlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọkụ dị ala nke 100W 277Vac
Ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala ndị nwere obere ọrụ na-akwụ ụgwọ bụ ọkụ na-arụ ọrụ site na ijikọta ọnụ ahịa-arụmọrụ na imewe dị ọcha. Ọ na-enye ndị ahịa uru niile nke ọkụ ọkụ ọkụ - belata ike oriri, ogologo oge ọrụ yana obere ndozi. Mgbanwe, nchekwa, na ntụkwasị obi, Fahold Low Bay Led Dimmable Driver bụ ezigbo ọkụ ọkụ nke ọkụ...
Ikanam na-ejikọ ọkụ na ihe ntanetị 24V LED Driver
Nkwakọ ngwaahịa: 40PCS / Kaadị
60W ịmafe Power Tụkwasịnụ emeputara nke voltage mgbe niile Linear na-eduzi sistemụ ọkụ, nke a Dimmable Led Driver nwere ike ịkwado 0-10V, PWM, Resistor na Dali dimming ụzọ. anyị bụ ndị na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-acha ọkụ ọkụ maka ihe karịrị afọ 10, Fahold bụ akara ama ama nke ọma dị ka anyị nwere ọtụtụ ndị ọkwọ...
24V 100W Ikanam Driver mgbe nile voltaji Aluminom Driver
Nkwakọ ngwaahịa: 24PCS / Kaadị
Fahold si Waterproof Dugara Driver dozie nsogbu dakọtara n'etiti oriọna na oriọna oriọna nke ọma. A na-ejikarị ọkụ eletrik arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche iji jikwaa ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ mgbidi, ọkụ ọkụ ọkụ na ihe ndị ọzọ Njirimara Ngwaahịa Wide nso nke input...
UL Constant Ugbu a Dimmable ikanam Linear Driver
HR50W-02 bụ 50W Constant ugbu a na-enye ike maka ọkụ ọkụ, nke nwere ike ịwụnye n'ime profaịlụ aluminom, mee ka ọkụ ahụ ka mma. Ọtụtụ ọkụ linear e mere dị ka Onye na-anya ọkụ ọkụ ọkụ oge a, ihe nlele a dabara adaba. Nkọwa ngwaahịa Nodị No.: HR50W-02 Volta ọsọ ọsọ: 100Vac-277Vac Mmepụta voltaji: 25V-40V Mmepụta Ugbu...
Ikanam Wall Pack Light Driver Canopy Light Driver
Nkwakọ ngwaahịa: 30PCS / Kaadị
FD-36H-054B bụ Fahold ezubere iche ịgbanye ike maka mmeghe na-eduga n'èzí. Emere onye ọkwọ ụgbọ mmiri a na-enweghị mmiri na 0-10V dimming ọrụ, Nrụpụta Ihe A Na-enye Ike Ugbu a, nke a na-etinyekarị maka ọkụ ọkụ n'okporo ámá na obere mgbidi oriọna na-etinye. Nke a bụ cUL edepụtara akara dịpụrụ adịpụ Dimmable Led...
320W IP65 Aluminom Ikanam Driver
Nkwakọ ngwaahịa: 9pcs / katọn 13.5KG
Product nkọwa: FD-320E-56B, emere ya shei Aluminium. Ọkwọ ụgbọ ala dị maka LED Gorw Light Bar, LED Quantum Board na-amụba ọkụ, ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ Pack, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ebe a na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griin. Ndị na-anya ọkụ, ndị na-enye ọkụ ọkụ, ndị na-enwu...
200W LED Drivers Industrial Lighting ọkwọ ụgbọala
Product nkọwa: FD-200E-54B, emere ya shei Aluminium. Ọkwọ ụgbọ ala dị maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị na-anya ọkụ, ndị na-enye ọkụ ọkụ, ndị na-enwu ọkụ n'okporo ụzọ, ndị na-agba ọkụ na-ekpuchi mmiri,...
150W Ikanam Driver N'èzí Commercial Lighting Driver
Product nkọwa: FD-150E-82B, emere ya shei Aluminium. Ọkwọ ụgbọ ala dị maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị na-anya ọkụ, ndị na-enye ọkụ ọkụ, ndị na-enwu ọkụ n'okporo ụzọ, ndị na-agba ọkụ na-ekpuchi mmiri,...
75W Tụkwasịnụ Ikanam Power IP65 Driver Power
Product nkọwa: FD-75E-82B, emere ya shei Aluminium. Ọkwọ ụgbọ ala dị maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị na-anya ọkụ, ndị na-enye ọkụ ọkụ, ndị na-enwu ọkụ n'okporo ụzọ, ndị na-agba ọkụ na-ekpuchi mmiri,...
Waterproof 58W Dimmable ikanam Driver
Product nkọwa: FD-58E-82B, emere ya shei Aluminium. Ọdụdọ ọkụ ọkụ dị elu dị maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị na-anya ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ndị na-enye ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, onye na-anya ọkụ ọkụ...
Aluminom shei 42W Ikanam ọkwọ ụgbọala ikanam Tụkwasịnụ
Product nkọwa: FD-42E-54B, emere ya shei Aluminium. Ọdụdọ ọkụ ọkụ dị elu dị maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, Linear High Bay, ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ griinụ. Ndị na-anya ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ndị na-enye ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, onye na-anya ọkụ ọkụ...
Mkpụrụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Fahold Electronics Co., ltd redefine the art of lighting interior, na-enye akwa arụmọrụ na flicker free ọkwọ ụgbọala na-eduzi ọkụ, ọkụ ụlọ ọrụ na ile ọbịa ọkụ. Maka nnukwu ọdọ mmiri na obere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ebe nchekwa ọkụ ọkụ, họrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala Onye na-akwọ ụgbọala ọhụụ HE018-01 Voltage mbata: 100-240V Oge...
Ọkwọ ụgbọala nke TUV European Power Supply
Fahold Electronics Co., ltd redefine the art of lighting interior, na-enye akwa arụmọrụ na flicker free ọkwọ ụgbọala na-eduzi ọkụ, ọkụ ụlọ ọrụ na ile ọbịa ọkụ. Maka nnukwu ọdọ mmiri na obere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ebe nchekwa ọkụ ọkụ, họrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala Onye na-akwọ ụgbọala ọhụụ HE042-01 Voltage mbata: 100-240V Oge...
Onye na-akwọ ụgbọala Igbe njikọ maka ọkụ ọkụ
Nkwakọ ngwaahịa: Edebere ya na mpempe akwụkwọ, wee tinye ya na katọn.
Inye Ike: 200000Pcs/Month
Min. Nhazi: 2000 Piece/Pieces
Nkọwapụta Ngwaahịa: A na-eji HN42W-02-A1050 Led Driver mee ihe maka ìhè panel. Emere ikpe ahụ site na ọla ọcha gbamgbam zinc steel, nke ga-agba ajari ma ghara ịdị n ’ụdị mfe, ihe a na-ejikọ ọnụ na usoro iwu waya nwere ike ekpughere na North America Ọdịdị mara mma nke ukwuu ma mejupụtara ezigbo ihe & akụrụngwa na -...
8000ma 200W 24-143V igwe ọkwọ ụgbọ ala dị elu na-egwu mmiri
Isi okwu Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ Nrụpụta dị elu ruo 93% Ọrụ dimming nhọrọ, 1-10V ma ọ bụ PWM Imewe maka ime ụlọ ma ọ bụ n’èzí Akwụkwọ ikike afọ 5 Nkọwapụta Ngwaahịa Ntanetị Ngwaahịa: nkwado: IP67 Ike imeputa MAX: 200W mgbe niile ugbu a imewe
IP67 onye na-eduzi ike ịkwọ ụgbọala / ike ọkọnọ
Nkọwa FD-160H-024 , nke edoziri maka ọkụ ọkụ LED Street, na-eduga ngwa ọgbụgba ọkụ ọkụ, iji rụọ ọrụ General Lighting Light waje. Ihe eji egbochi mmiri IP67, ya na 0-10V, PWM, RX dimming, gafere UL Certiication na 5years guarantee.input 100-277V, nnukwu mmepụta dị ugbu a nwere ike ime 5A, ire ọkụ n'ahịa a. Atụmatụ...
(CV) Volta Volta 24V Igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-akwọ ụgbọ ala
Min. Nhazi: 250 Bag/Bags
Nkọwa FD-80H-024B, Igwe ọkụ Aluminom na-enyocha ọkụ elektrik LED mgbe niile, Ezubere maka ngwa ọkụ n'èzí. Flicker na-akwụghị ụgwọ 60W 2700mA, yana UL, FCC, RCM, CB, CE na-agbaso, mpịakọta ọkụ eletrik dị ukwuu nke nrụpụta mkpuchi mmiri IP67. Ngalaba ndị ahụ dabara adaba maka ọkụ okporo ụzọ & ọkụ eletrik dị elu....
Na-eme njem 160W ka ọkwọ ụgbọala 0-10V Dimming
Nkọwapụta ngwaahịa Ngwaahịa ngwaahịa Voltage mmepụta: 24-38V, 30-42V, 36-54V, 45-76V, 72-143V Mgbatị mmepụta: 160W Akụkụ: 151.7X66.5 mm Arụmọrụ: 93% Encironment / IP Rating: ime ụlọ / n'èzí Max. Voltage na-abanye: 277V Akwụkwọ: UL, FCC, OA Ọrụ Mgbanwe zuru oke maka ọkụ ọkụ obodo Na-azọpụta 90% Eletrik na-eri, Ndị...
Atụmatụ Nkwọ ụgbọ ala eletriki Kọmputa : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Kwado 0-10V tinyere akara mgbawa, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. 100VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta m
Nkọwa FD-160H-024B, Ngwá ọkụ Ike na-agbanwe mgbe niile, Ekebere maka ngwa ọkụ n'èzí. Flickr free 120W 5000mA, na UL, FCC, RCM, CB, CE na-erube isi, mmepụta voltage dum nke nIP67 mmepụta mmiri. Nkeji dị mma maka ìhè dị elu n'okporo ámá na ọkụ ọkụ. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke nsoro gụnyere 100-277V , nchebe megide...
Atụmatụ ezinụlọ ezinụlọ Akara ugboro: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz Ihe omumu nke ngwa di iche iche site na ike nke ihe ruru 100W • Voltage ọkọnọ: 100 ... 277V V A na-enweta ya na mmepụta ihe dị ugbu a: ruo 4200 mA Ndị ọkwọ ụgbọala dịpụrụ adịpụ Uru ezinụlọ bara uru · Ngbanwe oge na-adị ugbu a site na NFC (Near Field...
200W 347Vac intertek na-enwu ọkụ akụkụ Igwe anaghị egbochi ya
Onye na-anya 55W Dimmable HR58W-02A / B / E / F enweghị onye na-emeghe
Slim Type Linear ikanya ọkwọ ụgbọ ala 1-10V dimkpa HR82W-02A / B / E / F
Ọga n'ihu ugbu a ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 50W
Linear butere ọkwọ ụgbọ Slim ụdị ọkọnọ ike ọkọnọ
Linear Driver Constant Ugbu A- ike ikike
Ihe mmezi a na-agbanwe agbanwe nke a na-eme ka ọkwọ ụgbọala dị n'elu
150W 347Vac Ọpụpụ Ike Ikike ọkụ
100W Na-akwọ ụgbọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị mmiri IP67
diy butere Linear light drivers 30W 347V
Ultra slim duru onye ọkwọ ụgbọ ala Linear
480Vac 150W Ọkụ ụgbọ ala eletrik ukwu dị elu 150W
Ọkwọ ụgbọala Na Enwu ọkụ ụgbọelu Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ụgbọelu Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ dị elu Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọkụ Ọkwọ ụgbọala ọkụkụ dị elu Ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala 55W Ọkwọ ụgbọala ọkụ ọkụ Ọkwọ ụgbọ ala na-enye ọkụ ọkụ
Copyright © 2021 ShenZhen Fahold Electronic Limited Ikike niile echekwala.